Global Voices teny Malagasy » Manohitra ireo Filipiana mpampianatra satria tsy tanteraka ny fampanantenana fisondrotan-karama nataon’ny fitondrana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Oktobra 2019 5:39 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fanabeazana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
“Omeo voninahitra ireo mpampianatra antsika” hoy ny vakin'ny teny filamatra nampiasaina nandritra ny hetsika fitaizana vatana nanasongadinana ireo fangatahana fampiakarana karama nataon'ireo mpampianatra avy amin'ireo sekolim-bahoaka. Loharanom-baovao: Pejy Facebook an'ny QCSTA, fampiasàna nahazoana alalana.
An'arivony ireo mpampianatra nanao filaharam-be  tao Filipina tamin'ny 4 Oktobra 2019 mba hangataka fanomezana fampiakarana karama “maha velona” ho azy ireo ihany sy ho an'ireo mpiasam-panjakana hafa koa, araka ilay fampanantenana nataon'ny governemantan'izy ireo. Ny omalin'ny Andro Erantany natokana ho an'ireo mpampianatra  no natao ny filaharam-be mba hanasongadinana  ny manjo ireo Filipiana mpanabe.
Araka ny voalazan'ny Ministeran'ny Fampianarana (DepEd), maherin'ny 800 000 no isan'ireo mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana amin'ny ambaratonga fototra sy faharoa ao Filipina. Efa ho ny 90% amin'izy ireo no mandray karama isam-bolana 20 000 pesos (387 USD). Eo amin'ny 287 USD ka hatramin'ny 308 USD ny karama farany ambany indrindra isam-bolana, nosoritan ‘ny governemanta ho an'ireo karazana asa samihafa.
Ny Vovonan'ireo Mpampianatra Velon'ahiahy, fikambanana iray mpitarika ao amin'ilay hetsika, dia mitaky karama farany ambany 30 000 pesos (580 USD) ho an'ireo mpampianatra amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Nampatsiahiviny tamin'ny filoham-pirenena Rodrigo Duterte  ihany koa ny fampanantenana nataony tamin'ny fampielezankevitra nanome antoka  tamin'ny taona 2016 ny hampiakarana ny karaman'ireo mpampianatra amin'ny sekolim-bahoaka.
Na dia toa manan-danja aza izany, mbola ho ambanin'ny vidim-piainana  isam-bolana 42 000 pesos (809 USD) hatrany ny karama farany ambany 30 000 pesos, nifototra tamin'ny kajy nataon'ny sekreteran'ny governemanta misahana ny fandrindrana ara-toekarena sy ara-tsosialy tamin'ny taona 2018.
Ny Contend, vondrona iray misy an'ireo mpikatroka mpanabe, no manazava  ny antony nikarakarain'ireo mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana ny iray amin'ireo fihetsiketsehana teo akaikin'ny lapam-panjakana.
Efa ho telo taona izao no naha filoham-panjakana an'i Duterte ary fitaka ilay fampanantenana fampitomboana ny karama ho an'ireo mpampianatra. Ankehitriny, tototry ny fikarakaràna taratasin'asa ireo mpampianatra, voafantsika amin'ireo asa ivelan'ny fampianarana, torovan'ireo ora ampianarana sy ireo adidy, ary latsaka anaty fahantran'ny tsy fahampiam-bola.
Satur Ocampo, mpanao gazety zokiolona sady mpikatroka ela nihetezana, mitanisa  ny asa fanampiny nataon'ireo mpanabe marobe:
…Miasa toy ny mpitantsoratra izy ireo, mpitahiry fanànana, mpanolotsaina mpanoro làlana, mpitsabo mpanampy, mpitantana tranomboky na mpiasa mpikojakoja sy mpanadio. Misy ireo andraikitra an'ny ministeran'ny Fahasalamana: maka an'ireo angona mikasika ny fahasalaman'ny mpianatra, manamora ny fandaharanasa fanadiovana sahanin'ny ministeran'ny fahasalamana, manome tànana amin'ireo fanentanana ho fanaovana vakisiny. Ho an'ny Departemantan'ny fiahiana sôsialy sy ny fampiroboroboana, izy ireo no mitantana ireo fandaharanasa mikasika ny sakafo any amin'ireo sekoly misy azy no sady manara-maso ireo mpianatra avy amin'ireo fianakaviana mahazo tombony amin'ilay fandaharanasa 4Ps [fanampiana ara-bola]. Ho an'ireo asa rehetra ireo, tsy mandray tambin-karama fanampiny ry zareo.
‘Boky fa tsy bala’ no anisany iray tamin'ireo teny filamatra tao anatin'ny fanoherana nataon'ireo mpampianatra avy amin'ny sekolim-panjakana, mba hanerena ny famindrana an'ireo tetibolan'ny fitsikilovana ara-miaramila sy polisy ho tombontsoan'ny fampianarana sy ireo asa sosialy hafa rehetra. Loharano: Pejy facebook an'ny Vovonan'ireo Mpampianatra Velon'ahiahy, fampiasàna nahazoana alalana.
Nampiasa ny tenifototra Twitter #TuparinAngPangako  (#TanterahoNyTokyNomena) Ireo mpampianatra sy ireo mpomba azy nandritra ny fihetsiketsehana
Tamin'ny faran'ny fandaharampotoanan'ny fanoherana, nanao hetsika niraisan'ireo olona tonga ireo mpampianatra mba hivaky hoe ‘3OK’ hanomezana endrika ny fangatahana ny karama farany ambany ho 30 000 pesos.
Fitambaran'olona mba hanome endrika '30K’ maneho ny fangatahana ny karama farany ambany ho 30 000 pesos ho an'ireo mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana ambaratonga voalohany. Loharano: Kodao Productions, mpiara-miasa amin'ny Global Voices amin'ny resaka vontoaty.
Valinteny tsy ampy avy amin'ny governemanta
Hatreto aloha, fepetra bitika no noraisin'ny governemanta Fillipiana mba hampitoniana ireo mpampianatra, fa tsy ny fampiakarana maharitra ny karama : tamin'ny volana jolay 2019, nanambara i Duterte fa nikaroka vahaolana ny governemanta mba hampiakarana tsikelikely  ny karaman'ireo mpampianatra. Herinandro iray monja talohan'ny Andro Erantany ho an'ireo Mpampianatra, nandany  vahaolana iray hanomezam-boninahitra ny asan'ireo mpampianatra ny antenimieran-doholona Filipiana. Farany, nanambara ny minisiteran'ny Fampianarana fa, amin'ny Andro Erantany ho an'ireo Mpampianatra, handray fankasitrahana ara-bola  ireo mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana . Saingy ny fanomezana 1 000 pesos amboniny fotsiny dia azo vinaniana fa tsy hanakana an'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy handeha lavidavitra kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/08/143784/
 nanao filaharam-be: https://www.bulatlat.com/2019/10/04/festive-but-defiant-teachers-call-for-just-wage/
 Andro Erantany natokana ho an'ireo mpampianatra: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Teachers
 fampielezankevitra nanome antoka: https://www.rappler.com/nation/141332-duterte-salary-increase-teachers
 no manazava: https://contendup.wordpress.com/2019/10/05/in-face-of-state-spawned-economic-austerity-and-state-backed-fascist-attacks-against-emancipatory-education-and-critical-educators-let-us-continue-teaching-to-expose-and-resist-dutertes-tyr/?fbclid=IwAR3wl83T6Iast1a0CVFeuDLZlP5qh_nvJ69kBgruxEwPc_6tsoZcqlMzEQ0
 hampiakarana tsikelikely: https://www.rappler.com/nation/236036-teachers-salary-increase-sona-2019-philippines
 fankasitrahana ara-bola: https://www.deped.gov.ph/2019/09/20/public-school-teachers-to-receive-world-teachers-day-incentive-benefit/